Somalia: Wasiirkii hore hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya oo qarax lagu diley - Wargane News
Home Somali News Somalia: Wasiirkii hore hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya oo qarax lagu diley
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya, in goor dhawayd qarax gaarigiisa loogu xiray lagu dilay Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Dowladdii Kumeel-gaarka ahayd Muxiyadiin Maxamad Xaaji Ibraahim.
Muxyadiin Maxamed Xaaji ayaan wax xil ah ka qaban Dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Xasan Shiikh, waxaana uu ahaa kuixgeenka urur Mucaarad ah oo lagu magacaabo Kulan. Muxyadiin Waxa uu horey u soo noqdey Wasiirkii Gaashaandhigga ee Xukuumaddii Nuur Cadde.
Qaraxa gaariga loogu xiray ayaa ka dhacay meel ku dhaw isgoyska KM4 magaalada Muqdisho, waxaana dhaawac soo gaarey qof kale oo gaariga saarnaa.
Cabdulqaadir Barnaamij oo ah Guddoomiyaha Ururka Kulan ayaa tacsi ka direy dilka Marxuumkan, waxaana uu dalbadey in la baaro isla markaana sharciga la horkeeno ciddii ka danbesyey.
Ma jirto cid sheegatey bomka gaariga lagu xirey. Muxyadiin ayaa ahaan jirey Wasiirkii Gaashaandhigga ee Xukuumaddii Nuur Cadde, wax xilal ah kama qaban Xukuumadda hadda jirta.